Fanatanjahantena any Frantsa Misy fepetra tsy maintsy hajaina
Roa andro taorianan’ny nivoahan’ny “plan de déconfinement” navoakan’ny praiministra Frantsay manomboka amin’ny faha-11 ny volany mey 2020 ho avy
izao dia nanamarika an’ireo fepetra tokony ho arahina amin’izany tamin’ny alakmisy 30 aprily 2020 lasa teo ny minisitry ny fanatanjahantena Frantsay. Nambarany fa : “raha noferana ho adin’ny iray ihany ary eo amin’ny manodidina ny 1 km miala amin’ny trano fonenany hatramin’izay nisian’ny fihibohana izay ny fahazoan’ny olona tsirairay manao fanazaran-tena samirery dia novahana ho malalaka kokoa izay fepetra izany manomboka amin’io 11 mey 2020 io. Araka ny toromariky ny “Haut Conseil de la Santé Publique » any an-toerana anefa, hoy izy, dia voafetran’ireo fepetra 5 manaraka ireto ny azon’ireo mpisehatra manatanteraka hetsika mampiasa vatana miaraka rehetra : 1° tsy voafetra intsony ny fe-potoana hanaovan’izy ireo fanazaran-tena. Faha-2 : tsy ilana fahazoan-dalana “Attestation” izany. Faha-3 : Tanana ho latsaky ny 100 km miala ny trano fonenana kosa no hanaovana izany. Faha-5 : olona 10 ihany raha be indrindra no mahazo miaraka manao fanazaran-tena ary faha-5 farany : tsy fahazoana mandeha ivelan’ny faritra. Tsy mahazo miditra ao anaty fisoloana akanjo “vestiaire” ireo manatanteraka hetsika an-kalamanjana rehetra. Ny lalao tenisy dia mahazo alalana malalaka ny fanaovana azy fa ny « sport de combat » sy fanatanjahantena iombonana kosa mbola voarara. Noferana ho 10 metatra kosa ny elanelan’ireo manao « jogging » sy hazakazaka am-bisikileta rehetra. Mitaky elanelana izay tratra kosa ny fanaovana hetsika an-kalamanjana toy ny tenisy sy yoga sy fitness ohatra… Mbola hamoaka ny lisitr’ireo taranja sy spaoro tsy azo atao any Frantsa tsy ho ela ity minisitera ity.